Intaan guriga gaajo ugu dhiman lahayn aniga iyo caruurtaydu karoonahu hanala tago Hooyo! (WQ: Yacquub Siciid Kuuriya) Q1aad | ToggaHerer
← Noocyadda Diiqada Ama Niyad Jabka W/Q: Cabdiraxmaan Rashiid (Dalmar)
Laba Qodob oo Dastuuri ah: Dowladda iyo Dadweynuhu ma Fuliyeen Waajibka uu Dastuurku Dusha ka Saaray? Faalo: Suxufi Maxamed Cirro →
Laga bilaabo xiligii aabahood gacanta ka qaaday korintooda oo ahayd marku balwada yeeshay iyaguna ay fadhi baradka ahaayeen labada waa weyni, ilaa hada waxaan soo helo mooye waligood may cunin ceesh cid kale u soo dhididay.
Maxaan cunaa mooyaane , waxba ma yaalaan ma yaqaanaan ilahay uunbaana og sidaan ku soo helo anfaaciga dhuuntooda maraaya, haba noqoto xataa deyn imika qeybo ka mida laygu leeyahaye oo cid iga bixinaysa iyo ceel ii qodani toona aanay jirine.
Subax kasta waxaan kici jiray xiliga ay hurdada ugu wanaagsan ku jiraan, hooyooyinka ila midka ahi oo ah 3:00 habeenimo, waxaan diyaarin jiray cuntada ay cunayaan caruurta roon rooni si ay malcaamada u aadaan.
Markaan ka kaco quraacda oo ku began xiliga salaada subax laga baxo ayaan gurigayga ka jarmaadi jiray intaan caruurta sii toosiyo, waxaanan subax walba sii lugayn jiray masaafo aad uga fog meesha aan deganahay, balse daalka lugta iyo culaayska alaabtaan wataa imay dhibi jirin waayo waxaa igaga xanuun kulul oo murugo igu haysa caruurtayda oo gaajoota isla markaasina jaarka looga soo dawariyo.
Waxaan hor fadhiistaa madarasad ku taala xaafada magaalada Hargeysa ka mida, waxaanan ku iibiyaa mususaace yar oo aan sidaas u badnayn,quraac basbaas,saambuuse,roodhi suugo yar la dhex mariyay,nacnac iyo waxoogaa iskiriina oo baco yar yar ku jira. Alxamdulilah lacag wanaagsan ayaa iga soo gasha waxaan habeen walba meesha kala hoydaa 50-kun ilaa 35-kun oo shillinka Somaliland ah, intaasa noo ah waxaanu maalinta dhan ee na soo waajahda kaga baxno, waxaan iibinayana kaga soo adeegto.
Waxaan gurigayga ku soo laabtaa, aniga oo cagaha biyo iga galeen hadana kuma fikiro inaan nasto oo aan seexdo , sababta oo ah ma jirto cid iga nasisa hawsha guriga xataa caruurtayda hablaha ku jiraa aad ayay u yar yaryahiin ta ugu weyni waa 7 jir oo may gaadhin wakhtigii cunto lagu halayn lahaa oo aan ka ahayn xaadh xaadhka guriga iyo weelasha oo ay ii xasho iyada oo la daala dhacaysa.
Waxaan dib u sameeyaa cashadooda ilaa aan gaadho in aan habeenada qaar aniga oo aan quraac hagaagsan cunin, xabad iskiriina iyo midh saambiise ahna ku qadeeyay maanta inaan ku dul gam’o cashadaan karinaayay sidaasina aan bilaa cunto ku noqdo hurdada iyo daalka I haya awgood.
Waxba uma arko cunta xumada oo waan xamaalanayaa, haday dumarka dhigay dhabanada iyo cagahooda dhalaaliyaan, daryeelkii naftayda dibada ayaan uga soo haajiray anigu oo iska daa inaan is daryeele waxaanan haleelin inaan timahayga garfeedh mariyo, wajigaygi casaana haaro iyo madow ay la socdaan gabow aanan dadeedi gaadhin ayaa qariyay.
Tani waa xaqiiqada noloshayda oo waxaan shaqaysto waxaan u shaqeeyaa sidaan maalinta lagu jiro ugaga bixi lahayn ani iyo caruurtaydu. Ma haystaan ubadkaygu aabo wanaagsan oo noloshooda damaanad qaada sida caruurta qeyrkood, balse waxaan nolosha ka riday geedka uu eryanaayo ee aan dheef naga soo gaadha jirin inuu isaga dhib u geysto mooyaane.
Ma qoomamaynaayo oo ilahaybaa igu arsaaqa 500 boqol ee shilling ee caruurta madarasadu mususaacaha igaga iibsadaan, si aan caruurtayda quutal daruuriga ugu iibiyo.